XOG: Kadib Hadalkii Uu Mourinho Ku Sheegay In Shan Ciyaartoy Uu Maamulka Kooxdiisa Ka Dalbaday Oo Aanu Wali Midna Hayn- Liiska Shantan Xidig Ee Uu Doonayo Oo La Ogaaday. - GoolTV.Net
XOG: Kadib Hadalkii Uu Mourinho Ku Sheegay In Shan Ciyaartoy Uu Maamulka Kooxdiisa Ka Dalbaday Oo Aanu Wali Midna Hayn- Liiska Shantan Xidig Ee Uu Doonayo Oo La Ogaaday.
By batalaale / 30/07/2018 30/07/2018
Hadaladii uu Jose Mourinho ka sheegay saxaafada kadib guuldaradii cuslayd ee kooxdiisa Manchester United ka soo gadhay Liverpool ayaa noqtay kuwo lama filaan ah isaga oo cadhadii guuldaradii Klopp ka soo gaadhay meelo kale kula dhacay. Jose Mourinho ayay caado u tahay in marka ay guuldaro ka soo gaadho koox wayn in uu sameeyo hadalo kuwaas oo sabab u noqda in lagaga mashquulo guuldarada kooxdiisa soo gaadhay.
Jose Mourinho ayaa eedayn u soo jeediyay Athony Martial laakiin waxa uu sidoo kale eedayn dahsoon iyo duur xul aan gabasho lahayn uu u soo jeediyay maamulka kooxdiisa Manchester United wuxuuna sheegay in dhawr bilood ka hor uu maamulka kooxdiisa u gudbiyay liiska shan ciyaaroty balse uu hadda sugayo in ay mid kaliya u keenaan.
Jose Mourinho ayaa isaga oo aan xaalad fiican ku jirin yidhi: “Waxaan jeclaan lahaa in aan laba ciyaartoy oo dheeraad ah haysto, anigu ma filayo in aan laba helayo, waxaan filayaa in ay suurtogal tahay in aan hal mid helo”.
Intaa kadib Jose Mourinho ayaa saxaafada u sheegay in shan ciyaartoy uu maamulka kooxdiisa ka dalbaday kuwaas oo uu hadda rajaynayo in uu mid kaliya ka heli karo wuxuuna yidhi: “Waxaan dhawr bilood ka hor kooxdayda u dhiibay liiska sha magac, waan sugayaa si aan u arko haddii ay suurtogal tahay in aan mid ka mid ah ciyaartoyodaas helo”.
Haddaba wargayska Daily Mirror ayaa shaaca ka qaaday liiska shanta magac ee uu Jose Mourinho maamulka kooxdiisa u gudbiyay ee uu sheegay in uu dhawr bilood ka hor liiskan u gudbiyay maamulka kooxdiisa waxaana kowa ka ahaa difaaca dhexe ee kooxda Tottenham ee Toby Alderweireld.
Waxa kale oo xidiga labaad lagu sheegay in uu ahaa Gareth Bale oo hadda si buuxda ugu muuqda in uu Real Madrid ku sii nagaanayo kadib bixitaankii Cristiano Ronaldo iyo imaatinka macalinka cusub ee Julen Lopetegui waxayna raadii Mourinho ee saxiixa Bale noqotay mid uu hadda ka quustay.
Xidiga saddexaad ee uu Jose Mourinho doonayay ayaa ahaa Sergej Milinkovic-Savic kaas oo qiimihiisa si wayn sare loo qaaday isla markaana aan ilaa hadda u muuqan in ay Man United la soo saxiixanayso.
Xidiga afraad ee uu Jose Mourinho u gudbiyay maamulka kooxdiisa ayaa ah Willian oo ka tirsan Chelsea kaas oo uu doonayay in uu ka dhigto badalka Anthony Martial kaas oo aanu ku faraxsanayn qaab ciyaareedkiisa.
Ugu danbayn Jose Mourinho ayaa doonayay in uu soo xoojiyo difaaca bidix ee kooxdiisa wuxuuna calaamadsaday midkood Alex Sandro oo Juventus ka tirsan iyo Kieran Tierney isaga oo mid ahaan doonayay taas oo ka dhigtay in uu doonayay shan ciyaartoy kuwaas oo aanu maanta midkoodna hayn.
Si kastaba ha ahaatee, Jose Mourinho ayaa tan iyo intii uu tababarka kooxdiisa ku soo laabtay si joogto ah u sheegayay erayo ayna jeclaysan jamaahiirta kooxdiisa Manchester United kuwaas oo ay u arkaan in ay yihiin cudur daar iyo afeef uu xili ciyaareedka cusub ka sii dhiganayo.